रेनो गाडीकाे विशेष फसर्भिस क्याम्प अफर-Setoghar
रेनो गाडीकाे विशेष फसर्भिस क्याम्प अफर
रेनोको नेपालको लागि आधिकारिक बितरकको रुपमा रहेको एड्भान्स अटो मोवाइल्स प्रा.लि.ले उपभोक्ताको सुबिधालाई दृष्टिगत गरेर ‘रेनो सर्भिस क्याम्प’ यहि मिति मंसिर २६ गते देखि संचालनमा ल्याएको छ । यो सर्भिस क्याम्प पुष २० गतेसम्म नेपालका बिभिन्न शहरहरुमा आयोजना हुने छ । जसमा उपभोक्ताले आफ्नो गाडीको उत्कृष्ट सर्भिस सेवा पाउने छन् ।
रेनोले यो सर्भिस क्याम्पको थिम ‘गिभ योर कार दी बेस्ट केयर’ राखेको छ । जसले ग्राहकलाई पूर्ण सन्तुष्ट हुनेगरी सेवा र सुबिधा दिने छ । यसबाट बिक्रीपछिको सेवामा रेनोको उपस्थिति बलियो हुने विश्वासमा कम्पनी छ ।
यो सर्भिस क्याम्प नेपालका मुख्य शहरहरुमा संचालन हुने छ । जसमा शाहारा अटोमोवाईल्स एण्ड कम्पनी प्रा. ली बिर्तामोड झापा ( मंसिर २६ र २७ ) गते, महाबिर अटोमोवाइल्स बिराटनगर (मंसिर २८ र २९), न्यु नारायणी मोर्टस् जनकपुर (पुष २), युनाइटेड अटो कन्र्सन नारायणगढ (पुष ४ र ५), जुपिटर ह्वल्स बुटबल (पुष ७ र ८), भैरहवा अटो कम्पनी भैरहवा (पुष ९ र १०), जोशी अटो भिल्ला दाङ (पुष १२), बगेश्वरी ट्रेड इन्टरनेशनल, नेपालगंज (पुष १४), विषेश माटोकर्प प्राली. धनगढी (पुष १६) र जोन्छेन ट्रेर्डस पोखरा (पुष १९ र २०) यी बिभिन्न शहरमा आयोजना हुँदैछ ।
यो सर्भिस क्याम्पमा सहभागि हुने ग्राहकले बिभिन्न छुटका सुविधाहरु पाउने छन् । जसमा निःशुल्क लेबर चार्ज, १५ प्रतिशत लुब्रिकेन्टमा छुट, एसीमा २०० जिएम रिफिलिङ निशुल्क, स्पेयर पार्टस्मा १० प्रतिशत छुट, निशुल्क भेइकल चेकअप, धुलाई र कोलेन निश्ल्क दिइने छ ।